လည်ဆွဲတရားခံကို သင်ရှာပြီး ဖမ်းပေးနိုင်ပါသလား? | Buzzy
လည်ဆွဲတရားခံကို သင်ရှာပြီး ဖမ်းပေးနိုင်ပါသလား?
ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်လာရင်းမိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ထိတ်ထိတ်ပျာပျာဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်…. ဒါကြောင့် စုံထောက်ကြီးလည်း မိန်းမပျိုနားကပ်လို့ အကျိုးအကြောင်းကိုမေးကြည့်ရာမှာတော့။ သူမလည်ဆွဲကို စာအုပ်ပေါ်တင်ပြီးအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။နိုးလာတာတော့ လည်ဆွဲမတွေ့ရတော့ပါဘ
You got: မှားပါတယ်။
သင်ရွေးတဲ့အဖြေပာာမှားပါတယ်။ ကောင်မလေးအနားက ခြေရာတွေပာာ အလာပဲရှိပြီး အပြန်ခြေရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့် ဘကတ်တံနဲ့တစ်ယောက်ယူတာမဖြစ်နီုင်ပါဘူး။ တကယ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ငါးမြားချိတ်ကိုင်ထားတဲ့တစ်ယောက်က အဝေးကနေပဲ ငါးမြားချိတ်နဲ့ လှမ်းယူနိုင်တာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရွေးတဲ့အဖြေပာာမှားပါတယ်။ ကောင်မလေးအနားက ခြေရာတွေပာာ အလာပဲရှိပြီး အပြန်ခြေရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့် မြားကိုင်ထားတဲ့စုံတွဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တကယ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ငါးမြားချိတ်ကိုင်ထားတဲ့တစ်ယောက်က အဝေးကနေပဲ ငါးမြားချိတ်နဲ့ လှမ်းယူနိုင်တာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရွေးတဲ့အဖြေပာာမှားပါတယ်။ ကောင်မလေးအနားက ခြေရာတွေပာာ အလာပဲရှိပြီး အပြန်ခြေရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့် မျက်မှန်အမဲနဲ့တစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ပါဖူုး။တကယ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ငါးမြားချိတ်ကိုင်ထားတဲ့တစ်ယောက်က အဝေးကနေပဲ ငါးမြားချိတ်နဲ့ လှမ်းယူနိုင်တာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရွေးတဲ့အဖြေပာာမှားပါတယ်။ ကောင်မလေးအနားက ခြေရာတွေပာာ အလာပဲရှိပြီး အပြန်ခြေရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့် ရေကူးမျက်မှန်နဲ့တစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တကယ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ငါးမြားချိတ်ကိုင်ထားတဲ့တစ်ယောက်က အဝေးကနေပဲ ငါးမြားချိတ်နဲ့ လှမ်းယူနိုင်တာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
You got: မှန်ပါတယ်ဗျာ
သင်ပာာ စုံထောက်ဥာဏ်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်မလေးအနားက ခြေရာတွေပာာ အလာပဲရှိပြီး အပြန်ခြေရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ငါးမြားချိတ်ကိုင်ထားတဲ့တစ်ယောက်က အဝေးကနေပဲ ငါးမြားချိတ်နဲ့ လှမ်းယူနိုင်တာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကျောက်ကပ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
တက္ကစီ စီးရာတွင် မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မည်နည်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လန်ဒန်မြို.မှာ စက်ဘီးစီးခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်လုံးတီး စက်ဘီးသမားများ
အံ့သြစရာ မိတ်ကပ်အစွမ်းနဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ သူတို့တွေ